Izikhathi eziningi Too imibhangqwana emisha overthink usuku lwabo lokuqala. Badlala ezimweni ezahlukene emakhanda abo ngalokho engase yenzeke futhi basebenze ngokwabo uxokozele ngaphambi empeleni baye ayithole ndawonye. I umcondvo lobalulekile ukwazi omunye umuntu ethatha isihlalo emuva bekhathazekile noma cha benza bahle – kakubhalwanga othinta ubuso babo esiningi, ukukhuluma kakhulu, hhayi ukukhuluma ngokwanele, nokunye.
Usuku lokuqala kumele kube yisikhathi ukwazi omunye umuntu nokulalela futhi uyasilandela abakushoyo. Ungakugwema kanjani ukulalela omunye umuntu uma uya ngalokho ozokusho futhi lokho oyikho noma awawenzi ngesikhathi yena ukhuluma? Uma ucabanga ngakho, empeleni kokuchitha isikhathi sakho ugxile wena ukukhohlwa ukuthi main kuloku omunye umuntu. Uchitha usuku lonke nawe; hlaba ikhefu futhi bachithe isikhathi omunye.
Ngakho, udinga ukuba baphume ikhanda lakho futhi ugxile ngomzuzu wamanje. Yini ethi ukuthi bangayiqonda? Yini lona ukwenza ukuthi ungathanda ukwazi okwengeziwe? Enye umqondo omuhle ukukhumbula ukuthi lokhu date yakhe yokuqala too, futhi kungenzeka kakhulu nje kwemizwa njengoba wena. Ingabe akhohlwe ukuvula umnyango ngawe? Noma singakwazi ukudonsa kwesitulo sakho out? Ingabe nje abonakala ekhuluma ngaye akalindele imibuzo? Uma ubona lezizimo ngasohlangothini ukuthi omunye umuntu futhi kuba nervous, kulula ukuvumela hambani nibone ukuthi ukuphi lonke nobusuku ziholele.
Uma banovalo onukayo, ukugcina ezinye shokolethe esikhwameni noma esikhwameni sakho. Kungaba kuhle ukuba abanye Kleenex noma iduku nawe kanye. Awudingi ukuba alethe yonke imithi iKhabhinethi, kodwa kokuba izinto ezimbalwa nawe noma close nawe kuyosiza ekufakeni kwakho kakhudlwana.
Iphuzu main konke lokhu ukuchitha isikhathi nosuku lwakho ubumnandi futhi ujabulela inkampani yakhe. Ukuphila kwenzeka futhi ngezinye izikhathi izinto zingenzeki njengoba kuhlelwe. Uma sigcine izingqondo zivulekile (futhi inhliziyo) ungakwazi Roll nanoma yini kwenzeka. Lokhu kungase kube usuku lokuqala eziningi. Relax and ukuyithanda!
Dating Online ngezinye izikhathi uzizwe eyonakalisayo kakhulu. Kungabangela ukuba azizwe ngomlilo, ekhungathekile futhi imbala. Ngakho ...